छिनछिनमा पिसाब लाग्ने समस्या छ ? हुनसक्छ यस्ता घातक रोगको संकेत।। - नागरिक खोज
१ हप्ता अगाडि • २८२ पटक पढिएको
काठमाडौँ । कहिले काही पटक-पटक पिसाब लाग्छ। यसको एउटा मात्र कारण हुँदैन। सामान्यतः धेरै पानी वा तरल पदार्थ पिएको बेला पिसाब लाग्छ, जो स्वभाविक हो।
त्यस्तै कहिले मानसिक कारणले समेत पिसाब लागेको अनुभव हुन्छ। गर्भावस्थामा वा बुढ्यौलीमा पनि धेरै पटक पिसाब लाग्छ, जसलाई सामान्य मानिन्छ।
टिमुर किन खाने ? के छन् यसका फाइदा ? युवाहरु हुन् थाले आकर्षण
एउटा खुट्टा मात्रै टेकेर यसरी मा’गेर आठ बर्षिय छोरोले आफ्नोे बुवा आमा पाल्दै, कठै (हेर्नुस् भिडियो)
यस्ता हुन्छन् मृगौला फेल हुन लागेको प्रारम्भिक संकेत, यी हुन् बचाउने आठ उपाय !
सन्तोष देउजालाई एक्का’सी के भयो ? चितवन मेडिकल कलेजमा सल्यक्रिया गरिदै नागरिक खाेज